धेरै बाठो बन्दा के हुन्छ ?- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
धेरै बाठो बन्दा के हुन्छ ?
बाबु नानीहरूमध्ये धेरैले आफैं चित्र कोर्ने गरेका छौ  । चित्र कोरेर त्यसमा रंग पनि भर्छौ  ।
तर चित्रअनुसार कथा भने कमैले लेख्छौ होला । चित्रअनुसार कसरी कथा लेख्न सकिन्छ ? कथाअनुसार कसरी चित्र दुरुस्तै कोर्न सकिन्छ ? चित्र र कथा मन पराउनेहरूका लागि रत्न पुस्तक भण्डारले बजारमा ल्याएको छ– दुइटा चित्रसहितका पुस्तक ‘चराहरूका राजा’ र ‘ऋषि र मुसा’ । कथामा काग र मुसा बाठो र शक्तिशाली बन्न खोज्दा भोग्नुपरेको अवस्थाबारे चित्रण गरिएको छ । चित्रअनुसार कथा नेपाली र अंग्रेजी शब्दमा लेखिएको छ । कथा छोटा मीठा छन् । शोभनले सम्पादन र सिमोनाले अनुवाद गरेका यी दुई किताबका आकर्षक चित्र सूर्यनारायण श्रेष्ठले बनाएका छन् ।
‘चराहरूका राजा’ किताबमा चराहरूको राजा नभएपछि ब्रह्माजीले जंगलका सबै चरालाई बोलाएर राजा छान्न खोज्छन् । कागलाई राजा बन्न मन लाग्छ । आफू नराम्रो र कालो भएकाले ब्रह्माजीले राजा नबनाउलान् भनेर डराउँछ । राजा बन्न वनमा बस्ने सबै चराका रंगीचंगी प्वाँख जम्मा गरेर शरीरमा लगाउँछ । कागको उत्साह देखेर ब्रह्माजीले उसैलाई राजा बनाउँछन् । तर अन्य चराले उसलाई राजा मान्दैनन् । सबै मिलेर कागको नक्कली प्वाँख निकालिदिन्छन् । काग पहिलाकै जस्तो देखिन्छ । उसलाई आफूले गरेको गल्तीको पश्चताप हुन्छ । त्यसैले ठग्नु हुँदैन । ठग्दा सबैले थाहा पाउँछन् । जे सत्य हो, त्यही बोल्नुपर्छ भन्ने सन्देश कथाले दिन्छ ।
अर्को पुस्तक हो ‘ऋषि र मुसा’ । यो कथामा मुसा अलि छट्टु हुन्छ । ऋषिले मुसालाई निकै माया गर्छन् । मुसाले जेजे भन्छ, ऋषिले त्यही पूरा गरिदिँदै जान्छन् । मुसालाई सबै कुराबाट जोगाउन बिरालो, कुकुर हुँदै बाघसम्म बनाइदिन्छन् । बाघ बनेको मुसाले उल्टै ऋषिलाई झम्टिएपछि फेरि मुसा नै बनाइदिन्छन् । कथाले गुण गर्दा बैगुनी बन्नेले पाउने सजाय बताएको छ । आफ्नो हैसियत बिर्सन नहुने सन्देश दिएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ११:४३